မှတ်သားစရာ နည်းယူစရာ | The World of Pinkgold
Category Archives: မှတ်သားစရာ နည်းယူစရာ
Posted on April 28, 2010 by cuttiepinkgold
သွေးဆိုတာ အသက်ရှင်သန်ဖို့အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအရေးကြီးတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့သွေးကို သူတစ်ပါး အသက်ရှင်သန်ဖို့အတွက် လှူဒါန်းမှုပြုတဲ့သူတွေဟာ အံ့သြလေးစားစရာ ကောင်းတဲ့ အလှူရှင်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့သွေးနဲ့ လည်ပတ်ပြီး အသက်ရှင်သန်ခွင့်ရသွားတဲ့သူတွေကိုကြည့်ရင်း ဖြစ်ရတဲ့ ပီတိဟာလည်း ဘာနဲ့မှ လဲလို့မရနိုင်ပါဘူး။ တစ်ကယ်တော့ သွေးလှူဒန်းမှူဟာ ကုသိုလ်ရတဲ့အပြင် ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းကျိုးတွေလည်း အများကြီး ဖြစ်ထွန်းစေပါသေးတယ်။ လူ့အသက်ကိုကယ်တဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်သလို ကိုယ့်အသက်ကိုကယ်မယ့် အကောင်းဆုံးသော နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့တောင် ကျွန်မကဆိုချင်ပါတယ်။ ကိုယ်လှူဒါန်းတဲ့သွေးကို ချက်ချင်းအသုံးပြုဖို့ အသက်တစ်မျှအရေးကြီးနေတဲ့ လူနာမရှိသေးဘူးဆိုရင်လည်း ကိုယ့်ရဲ့သွေးကို သွေးဘဏ်မှာ ထိမ်းသိမ်းထားပြီး လိုအပ်ရင် ချက်ချင်းသွေးသွင်းတာကို ပြုလုပ်နိုင်ဖို့ အကျိုးပြုစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သွေးလှူဒါန်းခြင်းကြောင့် ပထမဦးဆုံးရတဲ့ ကောင်းကျိုးကတော့ ကုသိုလ်ပဲပေါ့ရှင်။ ဒါကတော့ ကြီး ရွယ် ငယ် လတ် မရွေးသိကြတဲ့အရာ တစ်ခုပါ။ ကိုယ့်ခန္ဒာကိုယ်ထဲက ပိုနေတဲ့ သွေးတစ်ချို့ကို တစ်ခြားသူတွေ အသက်ရှင်သန်ရေးအတွက် လှူဒါန်းမှုပြုလိုက်ရခြင်းကြောင့် ကိုယ့်အတွက်လည်း ကြီးမားတဲ့ ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။ သွေးလှူဒါန်းလိုက်တာကြောင့်ပဲ ကျွန်မတို့တွေအတွက် နှလုံးရောဂါကို အလိုလိုကာကွယ်ပြီးသား ဖြစ်သွားပါတယ်။ သွေးလှူဒါန်းတယ်ဆိုတာ တစ်နည်းအားဖြင့်ပြောရရင် ခန္ဒာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ ပိုလျှံနေတဲ့ သံဓါတ်တွေကို ဖယ်ရှားပေးလိုက်တာပါပဲ။ ခန္ဒာကိုယ်ထဲမှာ သံဓါတ်တွေ သိပ်များလွန်းနေခြင်းဟာ ဆဲလ်တွေ၊ တစ်ရှူးတွေကို အလွယ်တစ်ကူပျက်စီးစေတဲ့ free radicals တွေကို လျှော့ချပေးပါတယ်။ အဲ့ဒီ free radicals တွေကြောင့်လည်း နှလုံးရောဂါ၊ ကင်ဆာရောဂါတွေ အစပျိုးလာရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သံဓါတ်တွေဟာ ကိုလက်စထရောတွေကိုလည်း များပြားလာစေပါတယ်။ Hemochromatosis ဆိုတဲ့ ရောဂါကတော့ သံဓါတ်လွန်ကဲခြင်းနှင့် ခန္ဒာကိုယ်ထဲက မညီညွတ်တဲ့ ဇီဝဖြစ်စဉ်တွေကြောင့် ဖြစ်လေ့ ဖြစ်ထရှိတဲ့ ရောဂါပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီရောဂါဟာ ပန်ကရိယ၊ adrenal gland နဲ့ အခြားသော ဂလင်းတွေကို ပျက်စီးစေတတ်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဆီးချိုရောဂါ၊ အသဲရောဂါနဲ့ နှလုံးရောဂါတို့ကိုလည်း အစပျိုးစေတတ်ပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် ပုံမှန်သွေးလှူဒါန်းခြင်းဟာ ပိုလျှံနေတဲ့ သံဓါတ်ကိုလျှော့ချပေးနိုင်ပြီး အထူးသဖြင့်တော့ လူငယ်တွေဆီမှာ နှလုံးရောဂါမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်တဲ့။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ သွေးလှူဒါန်းခြင်းဟာ ကယ်လိုရီများကို လျော့ကျစေနိုင်ပြီး ကိုလက်စထရောတွေကိုလည်း လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ သွေးလှူဒါန်းပြီးတဲ့နောက်မှာ ခန္ဒာကိုယ်ထဲမှာ blood cell တွေလျော့နည်းသွားပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်ပဲ ရိုးတွင်းခြင်ဆီထဲကနေ လျော့နည်းသွားတဲ့ ပမာဏကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးဖို့ ဆဲလ်အသစ်တွေ ထပ်မံမွေးထုတ်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် သွေးလှူဒါန်းခြင်းဟာ ဆဲလ်အဟောင်းတွေကို ဖယ်ရှားပြီး ဆဲလ်အသစ်တွေကို ဖြစ်ထွ်းစေတဲ့ ခန္ဒာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ organs and systems တွေကို ပြန်လည်းသစ်လွင်စေတဲ့ အချက်လည်းဖြစ်လာပါတယ်ရှင်။
ဒါပေမယ့် သွေးမလှူခင်တော့ ကျွန်မတို့တွေဟာ သွေးထဲမှာရှိတဲ့ ဟေမိုဂလိုဘင်ပမာဏကို အရင်စစ်ဆေးဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ဟေမိုဂလိုဘင် နည်းနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ သွေးလှူလို့ မရပါဘူး။ ဒါ့အပြင် သွေးပေါင်ချိန်နဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကိုလည်း တိုင်းတာရပါအုံးမယ်။ သွေးလှူဒန်းမယ့်လူဟာ hepatitis B, hepatitis C, Syphilis, HIV/AIDS နှင့် malaria ရောဂါများမှ ကင်းရှင်းနေဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီရောဂါတွေလည်း မရှိဘူး၊ ဟေမိုဂလိုဘင်လည်း ပြည့်တယ်ဆိုရင်တော့ သွေးလှူဒါန်းဖို့ အိုကေပြီပေါ့ရှင်။ သွေးလှူဒါန်းလို့ ဖြစ်လာတဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကတော့ များများစားစားမရှိလှပါဘူး။ တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ သွေးပေါင်ကျတာတွေ၊ သွေးပမာဏ နည်းသွားတာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ မူးမောတာတွေ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သွေးလှူဒါန်းခြင်းကြောင့် ရလာတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်လိုက်ရင်တော့ ဒီလိုခဏတာခံစားမှုတွေဟာ ဘာမှ မပြောပလောက်တော့ပါဘူးရှင်။ ဒါကြောင့် ကျွန်မကတော့ သူတစ်ပါးအသက်ကို ကယ်ဖို့နဲ့ ကိုယ့်အသက်ကို ကာကွယ်ဖို့ သွေးလှူကြပါလို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
သွေးလှူဒါန်းချင်စိတ်ရှိကြပြီး သွေးလှူဒန်းတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ အချိတ်အဆက်မရှိသေးကြသူများကတော့ ကျွန်မတို့ရဲ့ ရင်ခုန်သံ သွေးလှူရှင်များအသင်းကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ နှစ်လလျှင်တစ်ကြိမ် သွေးလှူဒန်ပွဲများကို ပုံမှန်ကျင်းပပေးနေပြီး ရန်ကုန်ဆေးရုံးကြီးရဲ့ သွေးဘဏ်ကို လှူဒန်းပေးပါတယ်။ ကိုယ်အဆင်ပြေတဲ့ အကြိမ်မှာ လာရောက်လှူဒန်လို့ရပါတယ်။ အရေးတစ်ကြီး သွေးလိုသူများ အနေနဲ့လည်း ရင်ခုန်သံကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ Emergency Case များအတွက်ကိုလည်း အခြားသွေးလှူရှင်းများအသင်းနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး သွေးလှူဒါန်းမှုများကို ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။
“လောကတွင် နှလုံးခုန်သံ ကင်းမဲ့နေသူသည် ရှင်သန်ခြင်း အလျှင်းမရှိ”
“Give Blood, Save Life”
Yin Khone Than Blood Donation Group
Ph: +95 01 243 542, 393 458,
Filed under မှတ်သားစရာ နည်းယူစရာ |	Leaveacomment
Posted on December 16, 2009 by cuttiepinkgold
ကျွန်မ ခုနောက်ပိုင်းမှာ အစားအသောက်သိပ်စားလို့ မ၀င်ဘူး။ အစားအသောက် စားမ၀င်ဘူးဆိုတာထက် ဗိုက်မဆာလို့ မစားဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်။ ဆာလို့စားလိုက်ပြီဆိုရင်လည်း ကြောင်စာဆိုသလောက်သာ စားဖြစ်တာကများပါတယ်။ အလုပ်များနေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆို နေ့လည်စာကို သေသေချာချာတောင် မစားဖြစ်တာမျိုးလည်း ရှိတတ်ပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ကျွန်မ ဘယ်တော့မှ မ၀ တာပေါ့ရှင်။ ပိန်တာ ၀တာတွေကို အသာထားပြီး အစားနည်းခြင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲတွေအနေနဲ့ ကျွန်မ ပင်ပန်းမခံနိုင်တာတွေ၊ ထစ်ခနဲရှိ နေမကောင်းဖြစ်တာတွေ၊ နောက်ဆုံး ကျွန်မ အခုတလော ခဏ ခဏ စိတ်တိုလွယ်တာမျိုးထိတောင် ဖြစ်လာပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းက ကျွန်မရုံးကလည်း ခွင့်ယူထားတဲ့အတွက် အိမ်မှာနေတုန်း အစားလေးတော့ ကောင်းကောင်းစားအုံးမှလို့ စဉ်းစားမိပြီး ခါတိုင်းမစားဖြစ်တဲ့ မနက်စာကိုပါ သေချာလေးကို စားဖြစ်ပါတယ်။ မနက်စာစားရင်းနဲ့ပဲ အိပ်ရာနိုးနိုးချင်းမှာ စားကြတဲ့ မနက်စာရဲ့ အရေးပါပုံတွေကို သိချင်လာတာနဲ့ မွှေနှောက်ရှာဖွေလိုက်တော့ မနက်စာ Breakfast ဆိုတာ လူတိုင်း မရှောင်လွှဲသင့်တဲ့၊ မဖြစ်မနေကို စားသင့်တဲ့ တစ်နေ့တာရဲ့ အရေးအပါဆုံးသော meal တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကျွန်မသိလိုက်ရပါတယ်။
မနက်အိပ်ရာကနိုးတဲ့အချိန်ဟာ ကျွန်မတို့အစာအိမ်ရဲ့ အဆာလောင်ဆုံးသော အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ညလုံး အစာခြေဖျက်ထားတဲ့အတွက် မနက်ကိုရောက်လာတဲ့အခါ ဆာလောင်မွတ်သိပ်မှုကို ခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မနက်စာဟာ အရေးပါတယ်လို့ ဆိုချင်ပါတယ်။ မနက်စာကို မစားဖြစ်လိုက်တာတွေ၊ တမင်ရှောင်လိုက်တာတွေဟာ အစာအိမ်ကို တစ်ဖြည်းဖြည်းအားနည်းစေပြီး အစာခြေဖျက်မှုစနစ်ကြီး တစ်ခုလုံးကလည်း အားနည်လာပါလိမ့်မယ်ရှင်။
နည်းနည်းပဲစားစား၊ များများပဲစားစား မနက်စာအဖြစ် တစ်ခုခုကိုတော့ စားသင့်ပါတယ်။ မနက်စာဟာ စိတ်ရောကိုယ်ပါ ကျန်းမာဖို့အတွက် အရေးပါတဲ့ အစားတစ်နပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပညာရှင်တွေရဲ့ လေ့လာချက်တွေအရ တွေ့ရှိရတာကတော့ မနက်စာစားခြင်းကြောင့် စိတ်စွမ်းအင်ကိုမြင့်မားစေပြီး မှတ်ဥာဏ်လည်းကောင်းလာမှာ ဖြစ်သလို၊ အာရုံစူးစိုက်မှုလည်း အားကောင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ မနက်စာမစားတဲ့ ကလေးတွေဟာ ကျောင်းမှာစာမလိုက်နိုင်တာမျိုးတွေ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိပါတယ်။ လူကြီးတွေမှာလည်း အတူတူပါပဲ။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ ဦးနှောက်ကို တစ်နေ့တာလုံး ရာနှုန်းပြည့် စွမ်းအားပြည့်ပြည့်အလုပ်လုပ်နိုင်စေဖို့အတွက် အဟာရရှိတဲ့ မနက်စာဟာ တစ်ကယ်ကို အရေးပါလှပါတယ်။
ကျွန်မ မနက်စာမစားဖြစ်တာရဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုကတော့ အိပ်ရာထ အမြဲနောက်ကျပြီး ရုံးသွားဖို့ကို အမြဲတမ်း ကမန်းကတမ်းပြင်ဆင်ရတာကြောင့် မနက်စာစားချိန် မရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့တွေကလည်း အလုပ်အရမ်းများတဲ့အတွက် မနက်စာ မစားဖြစ်တာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ အလုပ်များတဲ့သူတွေအတွက် မနက်စာစားဖြစ်စေမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ကျွန်မဆိုလည်း အခုဒီအတိုင်းကို လိုက်နာနေပါပြီ။
မနက်စောစောမှာ သစ်သီးစားတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ရယ်ဒီမိတ်ဖျော်ရည်လေးတစ်ခု သောက်လိုက်တာမျိုးပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပြုလိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ အချိန်လည်း မကုန်တဲ့အပြင် ပြင်ဆင်ဖို့ ကရိကထ မများတဲ့ နည်းလမ်းလေး ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
ဒီထက်ကောင်းတာတစ်ခုကတော့ စောစောအိပ်ရာဝင်ပြီး မနက်စောစောထ အဟာရရှိတဲ့ မနက်စာအတွက် ပြင်ဆင်နိုင်ပါသေးတယ်။ တစ်ချို့ ၀ိတ်လျှော့ချင်တဲ့သူတွေ မနက်စာရှောင်တာဟာ မှားယွင်းတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ မနက်စာစားခြင်းဟာ အကောင်းဆုံး ၀ိတ်လျှော့နည်းတစ်မျိုး ဖြစ်လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ချို့တွေကျပြန်တော့လည်း မနက်စာကို သေသေချာချာကို စားကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့စားတဲ့ အစားအသောက်တွေက ဒိုးနတ်တို့လိုမျိုး အရာတွေ၊ အခြား သကြားများများပါတဲ့ အရာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ သကြားဓါတ်များများပါဝင်နေတဲ့ မနက်စာဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် ဘယ်လိုမှ မကောင်းတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက နေ့လည်နေ့ခင်းမှာ အိပ်ငိုက်တာတွေ၊ မနက်စောစော မထနိုင်တာတွေဟာ အဟာရမရှိတဲ့ မနက်စာကို စားတာကြောင့် မဟုတ်ရင်လည်း မနက်စာ လုံးလုံး မစားဖြစ်တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မနက်စာစားတဲ့အခါ ရှောင်ရန် ဆောင်ရန်လေးတွေကတော့….
အရမ်းချိုတဲ့ အစားအသောက်တွေ စားခြင်းကို မပြုလုပ်သင့်ပါဘူး။ အဲ့ဒီအစားအစာတွေထဲမှာ ခန္ဒာကိုယ်ကို ဘာမှကောင်းကျိုးမပြုတဲ့ ဗလာကယ်လိုရီများသာ ပါဝင်ပါတယ်။ သကြားအများကြီးစားခြင်းကို ကိုယ်အလေးချိန်လည်း တိုးလာစေပြီး ၀လာစေပါတယ်။ မနက် ကိုးနာရီ ဆယ်နာရီ ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကတည်းက မောပန်းတာတွေ စဖြစ်နေပြီဆိုရင် ဒါဟာ သကြားပါတဲ့ အစားအစာတွေကို အများကြီး စားမိထားလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကြော်လှော်ထားတဲ့ မနက်စာဟာလည်း မကောင်းလှပါဘူး။ ၀က်ပေါင်ခြောက်ကြော်၊ ကြက်ဥကြော်တွေကို စားတာမျိုးကလည်း ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူမဖြစ်ပါဘူးတဲ့ရှင်။ အဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့ အဆီဓါတ်တွေကို ကိုယ့်ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို လေးလံစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေအစား အကင်တွေကို စားချင်ရင် စားပေးနိုင်ပါတယ်။
ကော်ဖီများများသောက်ခြင်းကိုလည်း မနက်စောစောမှာ မလုပ်သင့်ပါဘူးတဲ့။ ကော်ဖီက အင်နာဂျီတွေကို မြန်မြန်တက်စေပေမယ့် မနက်စာကို ကော်ဖီချည်းပဲ သောက်တာထက် အစားတစ်ခုခုစားပြီးမှသာ သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။
သကြားဓါတ်နည်းနည်း အချိုနည်းနည်းပါတဲ့ အစားအစာတွေကိုသာ စားပါ။ အကောင်းဆုံးသော မနက်စာကတော့ cereal တစ်ပန်ကန်လောက် စားတာမျိုးပေါ့ရှင်။
ကြက်ဥ ဆန်းဒွစ်ခ်ျကို စားသင့်ပါတယ်။ Fast Food ဆိုင်တွေမှာ အလွန်ခေတ်စားပြီး အလွယ်တကူလည်း ၀ယ်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ အိမ်မှာလည်း ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် လုပ်စားနိုင်ပါသေးတယ်။
ကြက်ဥတွေဟာ မနက်စာအတွက် အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ ကြော်စားတာမျိုးထက် ပြုတ်စားတာ ၊ မကျက်တကျက်စားတာမျိုးက အားပြည့်စေပါတယ်။
Pancakes တွေကလည်း ကောင်းတဲ့ အစားအစာ တစ်မျိုးပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အရမ်းအများကြီးစားမယ်ဆိုရင်တော့ ကယ်လိုရီတွေ တိုးစေတတ်ပါတယ်။ သကြားတွေ အများကြီးနဲ့ စားတာထက် သစ်သီးတွေနဲ့ စားမယ်ဆိုရင် ပိုသင့်တော်ပါတယ်။
ဖျော်ရည်တွေကလည်း ကောင်းပါတယ်။ ကော်ဖီသောက်တာထက် သစ်သီးဖျော်ရည်တွေကို ပိုသောက်သင့်ပါတယ်။
သစ်သီးတွေကို စားခြင်းကလည်း အကောင်းဆုံးသော မနက်စာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတိုင်းစားလို့ရသလို တစ်ချို့တွေကိုတော့ သုပ်စားနိုင်ပါသေးတယ်။
ဒါတွေအားလုံးကတော့ လွယ်လည်းလွယ် ကောင်းလည်းကောင်းတဲ့ မနက်စာ အမျိုးအစားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေကို လုပ်ဖို့အတွက် အချိန်လည်းမစား ကရိကထလည်း မများတဲ့အတွက် မနက်စာကို မှန်မှန်လေးစားသုံးဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ မနက်စာ မှန်မှန်စားတဲ့ကလေးတွေဟာ ကျောင်းမှာလည်း စာတော် ထက်မြက်ပြီး သူတို့တွေရဲ့ အပြုအမူတွေကလည်း ကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။
မနက်စာစားခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုးတွေကို ပညာရှင်တွေက ဘယ်လိုပြောဆိုခဲ့ကြသလဲဆိုရင်….
Harvard University/Massachusetts General Hospital ရဲ့ လေ့လာချက်အရ ကျောင်းမှာကျွေးတဲ့ မနက်စာကို မှန်မှန်စားဖြစ်တဲ့ ကျောင်းသားလူငယ်လေးတွေဟာ ဘာသာရပ်တွေမှာ အမှတ်တက်လာတာမျိုးတွေ၊ အပြုအမူတိုးတက်လာတာမျိုးတွေ၊ ကျောင်းပျက်ကွက်မှုနှုန်းကလည်း နည်းလာပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အတွေးအခေါ်တွေလည်း တိုးတက်လာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ (Pediatrics, January, 1998; Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, February, 1998)
ဘယ်မနက်စာ အမျိုးအစားကိုမဆို စားသုံးခြင်းဟာ ဆာလောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ဆိုးကျိုးတွေ၊ နောက်ဆက်တွဲ ပြသနာတွေကို မဖြစ်ပေါ်စေတော့ပါဘူး (Bonnie Spring, Ph.D. , University of Health Sciences/Chicago Medical School)
မနက်စာစားခြင်းဟာ စားပြီး 16 နာရီကြာအောင်ထိ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ညီညွတ်မှုတွေကို ထိမ်းထားပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် တန်ဘိုးရှိတဲ့ အချိန်တွေကို ရရှိစေဖို့ မနက်စာကို မဖြစ်မနေစားသုံးသင့်ပါတယ်တယ်ရှင်။
မနက်စာစားခြင်းက ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကိုလည်း လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ National Weight Control Registry ရဲ့ ခြောက်နှစ်အတွင်းမှာ ပေါင် ၆၀ ခန့်လျော့ကျသွားတဲ့ လူ ၃၀၀၀ အပေါ်မှာ လေ့လာချက်အရ သူတို့တွေဟာ မနက်စာကို မှန်မှန်စားသုံးကြတဲ့ သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိရပါတယ်။ မနက်စာကို မှန်မှန်စားသုံးခြင်းဟာ ၀ိတ်လျှော့ချဖို့ 78% လောက်သေချာမှုရှိပါတယ်။
Filed under မှတ်သားစရာ နည်းယူစရာ and tagged breakfast, Health |	5 Comments
Posted on June 29, 2009 by cuttiepinkgold
တစ်ခြားသူတွေအတွက် စဉ်းစားပေးခြင်းဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ ဘ၀ နဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့ အခြေခံ အချက်တွေ ဖြစ်တယ်။
တစ်ခုခုကို ချိုးဖောက်ပြီးရင်၊ ၀န်ခံလိုက်ပါ။
သင်မပြုပြင်တတ်ရင်၊ ပြုပြင်တတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ကို ခေါ်လိုက်ပါ။
တစ်ယောက်ယောက်ပိုင်တဲ့ ပစ္စည်းကို အသုံးပြုချင်ရင်၊ ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံပါ။
ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ မသိရင်၊ ဘာကိုမှ မထိပါနဲ့။
ကိုယ့်ကိစ္စမဟုတ်ရင်၊ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ရင် မေးခွန်းတွေ သိပ်မမေးပါနဲ့။
အကောင်းအတိုင်းရှိနေတဲ့ အရာတစ်ခုကို၊ မပြုပြင်ပါနဲ့။
တစ်စုံတစ်ယောက်အတွက် အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်၊ ပြောဖြစ်အောင် ပြောလိုက်ပါ။
တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်စေမယ်ဆိုရင်၊ ရင်ထဲမှာပဲ သိမ်းထားလိုက်ပါ။
The Rules of BeingaHuman
သင်ချစ်သည်ဖြစ်စေ၊ မုန်းသည်ဖြစ်စေ အဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာ သင်အသက်ရှင်နေသရွေ့ သင်နှင့်အတူရှိနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်ဟာ သင်ခန်းစာတွေကို လေ့လာသင်ယူရပါလိမ့်မယ်။
သင်ဟာ ဘ၀ လို့ခေါ်တဲ့ ပုံစံမကျတကျ အချိန်ပြည့်ကျောင်းတော်ကြီးမှာ ကျောင်းအပ်နှံခြင်းခံရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီကျောင်းကြီးမှာ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း သင်ခန်းစာတွေကို လေ့လာသင်ယူရပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ အဲဒီသင်ခန်းစာတွေဟာ သင့်အကြိုက်ဖြစ်နိုင်သလို၊ တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့လည်း မိုက်မဲလှတဲ့အလုပ်တစ်ခုလို့လည်း ထင်ချင်ထင်နေပါလိမ့်မယ်။
မတော်တဆအမှားဆိုတာ မရှိပါဘူး။ သင်ခန်းစာတွေ ချည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုဆိုတာ လေ့လာစမ်းသပ်မှုတစ်ခုရဲ့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုမျှသာ ဖြစ်ပါတယ်။ မအောင်မြင်(ကျရှုံး) တဲ့ စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်မှု (လက်တွေ့သုတေသန)များသည် နောက်ဆုံးဖြစ်သော အလုပ် ဆီသို့ လက်တွေ့ စမ်းသပ်မှုဖြစ်စဉ်၏ အစိတ်အပိုင်းမျှသာဖြစ်သည်တဲ့။
သင်ခန်းစာတစ်ခုကို အလွတ်မရမချင်း ထပ်ကာထပ်ကာ သင်ယူရမှာပါ။
သင်ခန်းစာတစ်ကို သင်အလွတ်မရမချင်း ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ သင့်ကိုသင်ကြားပေးပါလိမ့်မယ်။ ပိုင်နိုင်မှသာလျှင် နောက်အသစ်တစ်ခုကို တက်လှမ်းခွင့်ရှိပါတယ်။
သင်ခန်းစာတွေ သင်ယူခြင်းဟာ အဆုံးမရှိပါဘူး။
သင်ခန်းစာမရှိတဲ့ ဘ၀အစိတ်အပိုင်းဆိုတာလည်း ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သင်အသက်ရှင်သန်နေသရွေ့ လေ့လာစရာတွေ ရှိနေဆဲပါပဲ။
သင်မျှော်လင့်နေသောအရာသည် လက်ရှိအရာလောက် မကောင်းပါ။
သင်ရည်မှန်းပြီး ကြိုးစားနေသော အရာတစ်ခုသည် သင့်လက်ဝယ်ကိုရောက်ရှိလာသောအခါ၊ သင့်အတွက် နောက်လိုချင်သော၊ အရေးကြီးသော၊ ယခုထက်ပိုကောင်းသောအရာတစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာပေလိမ့်အုံးမည်။ ဒါကြောင့် လက်ရှိပိုင်ဆိုင်နေတာတွေဟာ အကောင်းဆုံးသော အရာတွေဖြစ်တယ်။
တစ်ခြားသူများသည် သင့်အတွက်မှန်တစ်ချပ်မျှသာ ဖြစ်သည်။
ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ချစ်သလား မုန်းသလားဆိုတာ တစုံတရာ တန်ပြန် မခံစားရသေးမချင်း တခြားလူတွေကို ချစ်နိုင် မုန်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
သင့်ဘ၀တွင် သင်လုပ်သောအရာမှန်သမျှသည် သင့်အပေါ်တွင်သာ မူတည်သည်။
သင့်မှာ သင်လိုအပ်တဲ့ အရင်းအမြစ်တွေ၊ ကီရိယာတန်ဆာပလာတွေ အစုံရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကို အသုံးတည့်အောင် ဘယ်လိုအသုံးချမလဲဆိုတာကတော့ သင့်အပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်။ သင့်ဟာသင် ရွေးချယ်ရမှာပါ။
သင်ခန်းစာတွေသင်ကြားပြီး ဘ၀ရဲ့မေးခွန်းတွေအတွက် ဖြေဆိုဖို့ အဖြေဟာ သင့်ရဲ့ကိုယ်၊ စိတ်တွေထဲမှာပဲရှိနေပါတယ်။
သင်လုပ်ရမှာကတော့ ကြည့်ရှု၊ နားဆင်ပါ၊ ယုံကြည်ပါ..စသောအရာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးမှာတော့ ဒါတွေအားလုံးကို မေ့မေ့ပျေက်ပျောက် ထားခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Sources: Cherie Carter-Scott
Filed under မှတ်သားစရာ နည်းယူစရာ and tagged thoughts |	6 Comments
What Men and Women Need?
Posted on June 5, 2009 by cuttiepinkgold
ချစ်သူတွေ အချင်းချင်းချစ်ခင်ကြတဲ့အခါ ချစ်ကြတာတွေအပြင် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် နားလည်မှု၊ ယုံကြည်မှုတွေ အများကြီး လိုအပ်ပါတယ်။ အချစ်ဆိုတာ ချစ်နေကြရုံနဲ့ ပြီးသွားတာမျိုးမဟုတ်ပဲ အားကိုးယုံကြည်မှုတွေ၊ အပြန်အလှန် အားပေးနှစ်သိမ့်မှုတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်မှသာ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အချစ်တစ်ခု၊ ခိုင်မာတဲ့ ချစ်ခြင်းတစ်ခုကို တည်ဆောက်နိုင်ကြမှာပါ။ ယောင်္ကျားနဲ့ မိန်းမ မတူညီတဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်နှစ်ယောက်ကြားမှာ မတူညီတဲ့ အချက်တွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီအချက်တွေကို နားလည်ထားရင်တော့ အလုံးစုံမဟုတ်ရင်တောင် အနည်းဆုံးတော့ ညှိနှိုင်းမှုတွေ ရယူနိုင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်မဆို ယောင်္ကျားတွေကို နားကိုမလည်တာ။ သူတို့ မိန်းမတွေဆီက ဘာလိုချင်တာလဲ၊ မိန်းမတွေကို ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေမှ သူတို့ကို ကျေနပ်စေမှာလဲ ဆိုတာတွေ အများကြီး တွေးဖူးတယ်။ ဒီလိုပါပဲ မိန်းမတွေက နားလည်ရခက်လိုက်တာ ဆိုပြီးပြောတဲ့ ယောင်္ကျားတွေကိုလည်း အများကြီး တွေ့ဖူးပါတယ်။ ကိုယ့်ချစ်သူကိုတောင် ကိုယ်နားမလည်ဘူးဆိုရင် ဒီနှစ်ယောက်က ဘ၀တစ်ခုကို ဘယ်လိုပေါင်းစပ်နိုင်မှာတဲ့လဲနော်။ သာယာပြီး ပြသနာ မများတဲ့ အချစ်တစ်ခုကို ရရှိနိုင်ဖို့အတွက် အောက်ပါ အချက်တွေက အများကြီး အကူအညီပေးနိုင်မယ် ထင်ပါတယ်ရှင်။
5)	တရားဝင် ခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်မှု
1။ သူမက ဂရုစိုက်မှုကို လိုအပ်ပြီး သူက ယုံကြည်ကိုးစားမှုကို လိုအပ်တယ်
မိန်းမတစ်ယောက် ခံစားနေရတာတွေကို ယောင်္ကျားတစ်ယောက်က စိတ်ဝင်စားမယ်၊ သူမ စိတ်ချမ်းသာမှုအတွက် ယောင်္ကျားက စိတ်လိုလက်ရ ကြိုးစားပေးမယ်ဆိုရင် ငါ့ကိုချစ်တယ်၊ ငါ့ကိုဂရုစိုက်တယ်လို့ မိန်းမက မှတ်ယူသွားမှာပဲ။ ဒီလိုသာမှတ်ယူသွားပြီဆိုရင်တော့ မိန်းမရဲ့ ပထမဆုံး အခြေခံလိုအပ်ချက်အတွက် ယောင်္ကျားဘက်က အောင်အောင်မြင်မြင်ဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်ပြီလို့ ပြောနိုင်ပါပြီ။ မိန်းမကလည်း သူ့အပေါ်ပိုပြီး ယုံကြည်စိတ်ချတော့မှာ ဖြစ်တယ်။ ယုံကြည်စိတ်ချပြီ ဆိုတဲ့နောက်မှာတော့ မိန်းမဟာ ပိုပွင့်လင်းလာတော့မှာ သေချာပါတယ်။ ပိုလက်ခံလာတော့မှာ သေချာပါတယ်။
မိန်းမက ပွင့်လင်းလာပြီ၊ ပိုလက်ခံလာပြီဆိုရင် ယောင်္ကျားက ငါ့ကိုတော့ ယုံကြည်ကိုးစားသွားပြီလို့ မှတ်ယူနိုင်ပြီပေါ့။ ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ကို ယုံကြည်ကိုးစားတယ်ဆိုတာ ယောင်္ကျားက ငါ့အတွက် အကောင်းဆုံး ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်၊ ငါ့အတွက်သူက အကောင်းဆုံးကို အလိုရှိနေတယ်လို့ ထစ်ထစ်ချတွက်ထားတဲ့ သဘောကို ဆောင်ပါတယ်။ မိန်းမရဲ့ တုန့်ပြန်မှုတွေမှာ သူ့ယောင်္ကျားရဲ့ စွမ်းရည်၊ သူ့ယောင်္ကျားရဲ့ ဂရုစိုက်မှုတွေကို လုံးဝ ယုံကြည်စိတ်ချနေတဲ့ ယောင်္ကျားဖြစ်သူရဲ့ အချစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပထမဆုံးသော အခြေခံအချက်ဟာ ပြည့်ဝသွားပြီလို့ ယူဆဖြစ်သွားပါတယ်။
၂။ သူမက နားလည်မှုကိုလိုအပ်ပြီး သူကလက်ခံမှုကို လိုအပ်တယ်
ယောင်္ကျားက အဆုံးအဖြတ်တွေမချပဲ နားထောင်တဲ့အခါ၊ စာနာမှုနဲ့ နားထောင်ပေးတဲ့အခါ မိန်းမကလည်း ငါပြောတာတွေကို သူနားထောင်သားပဲ၊ ငါ့ကိုသူနားလည်သားပဲ လို့ခံစားသွားရမှာပါ။ မိန်းမက ဒီလိုသာခံစားသွားရပြီဆိုရင်တော့ ယောင်္ကျားလိုအပ်နေတဲ့ လက်ခံမှုကိုပေးဖို့ သူမ ၀န်မလေးတော့ပါဘူး။ ယောင်္ကျားဘက်က ငါ့ကိုလက်ခံသွားပြီလို့ ထင်လိုက်ပြီဆိုရင် နားထောင်ဖို့လည်း အပန်းကြီးတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် သူမလိုအပ်နေတဲ့ သူမနဲ့ ထိုက်လည်းထိုက်တန်တဲ့ နားလည်မှုကို အလွယ်တကူ ပေးသွားတော့မှာပါ။
၃။ သူမက လေးစားမှုကိုလိုအပ်ပြီး သူက ကျေးဇူးတင်မှုကို လိုအပ်တယ်
မိန်းမရဲ့ လိုအပ်မှုတွေ၊ အလိုဆန္ဒတွေ၊ အခွင့်အရေးတွေကို ယောင်္ကျားက အသိအမှတ်ပြုပုံမျိုး၊ ဦးစားပေးပုံမျိုးနဲ့ တုံ့ပြန်သမှု ပြုမယ်ဆိုရင် မိန်းမဟာ ငါ့ကိုလေးစားသားပဲလို့ ယူဆလိုက်တော့မှာပါ။ ဒီလိုသာ ယူဆလိုက်ပြီဆိုရင် ယောင်္ကျားလိုအပ်နေတဲ့ ကျေးဇူးတင်မှုကိုလည်း သူမကပေးဖို့ သိပ်ကိုလွယ်ကူသွားပါပြီ။ ယောင်္ကျားရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုများနဲ့ အပြုအမူများကြောင့်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ ကောင်းကျိုးတွေကို မိန်းမက ကောင်းကောင်းကြီးခံစားနေရကြောင်း သိသာပေါ်လွင်နေတဲ့အခါမှာ ယောင်္ကျားအနေနဲ့ ငါတော့ ကျေးဇူးတင်ခံနေရတာတော့ သေချာပြီ လို့ ကောက်ချက်ချနိုင်ပါပြီ။ အမှန်တော့ ကျေးဇူးတင်မှုဆိုတာ အထောက်အပံ့ခံရမှုအတွက် တုန့်ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်။ ငါ ကျေးဇူးတင်ခံရပြီလို့ ယောင်္ကျားက ထင်လိုက်ပြီဆိုရင် သူ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေက အလကားမဖြစ်တော့ဘူးလို့ သဘောပိုက်လိုက်ပါတယ်။ သူ့ဘက်က ဆတန်ပိုးတိုးပြီး ကြိုးပမ်းအားထုတ်တော့မှာလည်း သေချာနေပါပြီ။ ယောင်္ကျားတစ်ယောက် ကျေးဇူးတင်ခံရပြီဆိုရင် သူ့မှာ စွမ်းရည်အထူးတွေ အလိုအလျောက်ရလာပါတယ်။ မိန်းမကို လေးစားလိုစိတ်တွေလည်း အလိုအလျောက် မြင့်တက်လာပါတယ်။
၄။ သူမက စွဲစွဲမြဲမြဲမြတ်နိုးမှုကို လိုလားပြီး သူက ချီးကျူးမှုကို လိုအပ်တယ်
ယောင်္ကျားက မိန်းမလိုအပ်မှုတွေကို ဦးစားပေးမယ်၊ သူမလိုအပ်သမျှတွေကို ဂုဏ်ယူဝင့််ကြွားစွာ ဖြည့်ဆည်းပေးမယ်ဆိုရင် မိန်းမတွေရဲ့ စတုတ္ထမြောက်လိုအပ်မှုဟာ ပြည့်ဝသွားပါပြီ။ ကြည်ညိုလေးစားခံရတယ်၊ အထူးဦးစားပေးတယ်လို့ ခံစားနေရရင် မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀ဟာ လန်းစွင့်နေတော့တာပါပဲ။ ယောင်္ကျားက အခြားအရေးတွေ ဥပမာ – အလုပ်အကိုင်၊ လေ့လာစရာ၊ အပန်းဖြေမှုများထက်၊ မိန်းမအရေးတွေကို ဦးစားပေးရင် မိန်းမတွေက သိပ်ကိုကျေနပ်အားရ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ငါ့ကို ပထမ နေရာမှားထားတယ်လို့ သိနေထင်နေတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ ယောင်္ကျားကို ချီးကျူးဖို့ လုံးဝ လွယ်ကူနေပြီပေါ့။ အမှန်တော့ ယောင်္ကျားကို ချီးကျူးတယ်ဆိုတာ ယောင်္ကျားကို အံ့သြစရာအဖြစ်၊ ပျော်စရာအဖြစ် ကျေကျေနပ်နပ်သဘောတူစရာအဖြစ် မှတ်ယူထားခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၅။ သူမက တရားဝင် ခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်မှုကို လိုလားပြီး၊ သူက သဘောတူညီမှုကို လိုအပ်တယ်
မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားမှုတွေကို အလိုဆန္ဒတွေကို ယောင်္ကျားက မကန့်ကွက်ဘူး၊ ခံစားသင့်တယ် အလိုဆန္ဒ ရှိသင့်တယ်လို့ ခိုင်ခိုင်မာမာလက်ခံပေးရင် ငါ့ကို တစ်ကယ်ချစ်တာပဲလို့ ထင်သွားမှာပါ။ ဒီလိုထင်သွားရင် မိန်းမရဲ့ ပဉ္စမမြောက်အခြေခံလိုအပ်ချက် ပြည့်ဝသွားပြီလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
၆။ သူမက ကတိပြုမှုကို လိုအပ်ပြီး၊ သူက အားပေးအားမြှောက်ပြုမှုကို လိုအပ်တယ်
ဂရုစိုက်မှုတွေ၊ နားလည်မှုတွေ၊ လေးစားမှုတွေ၊ ခိုင်မာမှုတွေ၊ မြတ်နိုးမှုတွေကို ယောင်္ကျားဘက်က အထပ်ထပ်အခါခါပြနေရင် ကတိပြုမှု၊ တစ်နည်းအားဖြင့် ယေင်္ကျားတို့ရဲ့ ကတိစကားတွေကို ကြားနေရသလို မိန်းမက ထင်မှတ်နေပါတယ်။ ဒီလိုကတိတွေ ထပ်တစ်လဲလဲ ပေးနေခြင်းဟာ အမှန်တော့ သူမဟာ ထာဝရ အချစ်ခံနေရတယ်ဆိုတာ သက်သေထူပေးတာပါပဲ။
ယောင်္ကျားဟာ အများအားဖြင့် မိန်းမရဲ့ ချစ်ခြင်းဆိုင်ရာ အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးပြီးပြီ၊ မိန်းမကလည်း ပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေပြီဆိုရင် မိန်းမဘက်က ငါ့ကိုချစ်တယ်လို့ တစ်သက်လုံးမှတ်ယူလိုက်နိုင်တာပဲလို့ မှားယွင်းစွာ ယူဆတတ်ကြပါတယ်။ တစ်ကယ်တော့ ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ မိန်းမရဲ့ အဌမမြောက်လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့ မိန်းကို ထပ်ခါ ထပ်ခါ ကတိတွေပေးနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Source: Men are from Mars, Women are from Venus
Filed under မှတ်သားစရာ နည်းယူစရာ |	4 Comments
Posted on May 21, 2009 by cuttiepinkgold
စာမေးပွဲ ဖြေဖို့ စာကျက်ရမှာမို့ ဘလောဂ့်ကို 15 ရက်လောက်တော့ ပစ်ထားရလိမ့်မယ်ရှင့်။
ပြန်လာရင် ပိုစ့်တွေ အများကြီးတင်မယ်.. ဖတ်ဖို့ စောင့်နေကြပါနော်။
၀တ္ထုလည်း ရေးထားပြီး လက်စမသတ်ရသေးတာ ရှိနေတယ်.. ပြန်လာမှ ရသပေါင်းစုံ ခံစားစေမယ်။
အားလုံး တာ့တာ ပါရှင်။.. သြော် နေအုံး မတာ့တာခင် လက်ဆောင် အနေနဲ့ ပိုစ့်လေး တစ်ခုလောက်တော့ ရေးခဲ့ပါအုံးမယ်။ မေလ်းကရတာကို ဘာသာပြန်ထားတာပါရှင်။
အစာအိမ်တွေ၊ အူတွေ နာတဲ့အထိ ရီနေရတဲ့အချိန်။
ကျေးလက်ဘက်ကို ကားမောင်းထွက်ရတဲ့ အချိန်။
ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ သီချင်းကို ရေဒီယိုမှာ နားသောတဆင်ရတဲ့ အချိန်။
မိုးစက်ကျသံတွေကို နားစွင့်ရင်း အိပ်ရာဝင်ရတဲ့ အချန်။
ရေချိုးပြီးလို့ ခန္ဓာကိုယ်ကို အမွေးထူထူ၊ ခပ်နွေးနွေးတံဘက်တစ်ထည်နဲ့ လွှမ်းခြုံရတဲ့ အချိန်။
စာမေးပွဲကို အမှတ်ကောင်းကောင်းနဲ့ အောင်တဲ့အချိန်။
ဆွေးနွေးပွဲတွေနဲ့ စကားဝိုင်းတွေမှာ ကိုယ်လည်း တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပါဝင်ရတဲ့အချိန်။
အင်္ကျီအဟောင်းတွေကနေ မထင်မှတ်ပဲ ပိုက်ဆံရှာတွေ့တဲ့အချိန်။
ကိုယ့်ကို ချီးကျုးနေကြတာကို အမှတ်မထင် ကြားရတဲ့အချိန်။
နေ၀င်ချိန်ကို စောင့်ကြည့်ရတဲ့ အချိန်။
ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့ အရေးအပါဆုံး လူ တစ်ယောက်ကို သတိရစေမယ့် သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ကြားရတဲ့ အချိန်။
ပထမဆုံး အနမ်းပွင့်ခြွေတဲ့ အချိန်။
ကိုယ့်ရဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူကို တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာ တစ်ကိုယ်လုံးတုန်တဲ့အထိ ရင်ခုန်တဲ့အချိန်။
ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတစ်ယောက် ပျော်နေတာကို မြင်ရတဲ့အချိန်။
ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့၊ ချစ်တဲ့သူတစ်ယောက်ရဲ့ အင်္ကျီကို ၀တ်ရတဲ့အချိန်နဲ့ သူ့ရဲ့ရေမွှေးကို ဆွတ်ရတဲ့အချိန်။
“သိပ်ချစ်တာပဲ” ဆိုတဲ့စကားကို ကြားရတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်ကပြောရတာပဲဖြစ်ဖြစ် ရရှိတဲ့ အခိုက်အတန့်။
ရေးပြီးမှ ပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်မဟာ ဘ၀ရဲ့အကောင်းဆုံးပါဆိုတဲ့ အခိုက်အတန့်တွေကို အလုံးစုံအောင် မခံစားဖူးသေးပါလားရှင်။
Filed under မှတ်သားစရာ နည်းယူစရာ, Uncategorized |	7 Comments
Second Edition By Pinkgold
Posted on April 23, 2009 by cuttiepinkgold
ဘလောဂ့်ဂါ တော်တော်များများ ရေးနေကြတဲ့ ဒုတိယအကြိမ်ဆိုတဲ့ တဂ်ဂိမ်းလေးက ခုတော့လည်း ကျွန်မဆီရောက်လို့ လာပြန်ပါပြီ။ သူငယ်ချင်း မီးလေးက ကျွန်မကို ဂျီတော့ကနေ လာတဂ်သွားလေရဲ့။ ကျွန်မက ဘလောဂ့်ကို လိုင်းတစ်လိုင်းတည်း သီးသန့်မရေးတော့ တစ်ကယ်တမ်းပြန်ရှာကြည့်တဲ့အခါ ဘာကိုပြန်တင်လို့ တင်ရမယ်မှန်း မသိဘူး ဖြစ်နေလေရဲ့။ ကြိုက်တာတွေကလည်း တော်တော်လေးများနေတာကိုးရှင့်။ ဒီတော့ လောလောဆယ် ဓါတ်ကျနေတဲ့ အချစ်အကြောင်းလေးထဲက ကောင်းနိုးရာရာ သုံးခုလောက်ကို ပြန်တင်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ အားလုံးလည်း ကြိုက်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
How people love with which way?
လူတွေ ဘယ်လို အခြေအနေတွေနဲ့ချစ်ကြပါသလဲ
1. Similarities – စိတ်ကူး စိတ်သန်းတွေ၊ ၀ါသနာတွေ၊ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုတွေ အစရှိသဖြင့် တူညီမှုတွေကြောင့် ချစ်ကြပါတယ်။
2. Physical appearance – ရုပ်ရည် ကြည့်ကောင်းတာ၊ စကားပြော ချစ်စရာကောင်းတာ.. အစရှိဖြင့်ကြောင့် ချစ်ကြပါတယ်။
3. Propinquity – မကြာခဏတွေ့ နေရလို့ ၊ အနေနီးစပ်လို့ချစ်ကြိုက်သွားကြပါတယ်။
4. Competence – လုပ်ရည်ကိုင်ရည် အရည်အချင်းရှိလို့ချစ်ပါတယ်။ (သို့ ပေမယ့် အမှားလုံးဝ မရှိသူထက်ဆိုင်ရင်၊ အရည်အချင်းရှိပြီး တစ်ခါတလေ အမှားနည်းနည်း လုပ်တတ်တဲ့သူကို ပိုသဘောကျတတ်ကြပါတယ်။ ပိုပြီး လူသားဆန်တဲ့သဘောပေါ့နော်။ ချဉ်းကပ်ဖို့ လည်း အခြားသူမှာ သက်တောင့် သက်သာ ရှိသလို ခံစားမိတတ်ကြတယ်လေ။)
5. Reciprocity – တစ်ယောက်ယောက် မင်းကို ချစ်တယ်လို့ဖွင့်ပြောလို့ကြိုက်လိုက်တာလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။
6. Self disclosure – တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက် ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း ပြောကြ၊ ခင်မင်ရင်းနှီးကြပြီး ချစ်သွားကြပါတယ်။ (ဒါပေမယ့် ကိုယ်ကြိုက်နေတဲ့သူကို တွေ့ တွေ့ ချင်း အိတ်သွတ် ဖာမှောက် အကုန် မပြောချလိုက်ပါနဲ့ ။ တဘက်လူက လန့် သွားတတ်ပါတယ်။ အချိန်ယူပါ.. ကိုယ့် အကြောင်း နည်းနည်းချင်းစီပြောပြပါ။)
7. Unknown factor – နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ ရှေး ဘ၀ ဘ၀တွေက ရေစက်တွေကြောင့်လည်း ချစ်သွားတတ်ကြပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့နေ့ စဉ် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာ တစ်ယောက် နားလည်နိုင်မယ့် ဘာသာစကားနဲ့နောက်တစ်ယောက်က ပြောဆိုရသလိုပဲ..
ချစ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လင် မယား အချင်းချင်းပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ယောက်ရဲ့ ဘာသာစကားကို တစ်ယောက် သိထားသင့်ကြပါတယ်။ ချစ်သူ အချင်းချင်း ဆက်သွယ်တဲ့ ဘာသာစကားကိုတော့
ခပ်လွယ်လွယ်ပဲ Love Language လို့ခေါ်ပါတယ်။ ငါးမျိုး ရှိပြီး Dr. Chapman က ထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။
Filed under မှတ်သားစရာ နည်းယူစရာ |	9 Comments
10 Best ways to hold hands of your sweet heart
Posted on March 14, 2009 by cuttiepinkgold
“မင်းလက်ကလေး ကိုင်ချင်လွန်း… လို့တစ်စက္ကန့်လောက်ခွင့်ပြုပါ” ဆိုတဲ့ Rဇာနည်ရဲ့ သီချင်းလေးကို ကြားဖူးကြမယ် ထင်တယ်။ ချစ်သူကောင်မလေးရဲ့ နွေးထွေးတဲ့ (အေးစက်တဲ့) လက်ဖ၀ါးလေးတွေကို ကောင်လေးတွေ မြတ်မြတ်နိုးနိုး ကိုင်ဖူးချင်ကြမှာပါပဲ။ လက်ကိုင်တယ်ဆိုတာ အသားချင်းထိတွေ့တာထက် အဆတစ်ရာမကပိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်သဘောတွေကို ဖော်ဆောင်ပါတယ်။ ရည်းစားတွေမှ မဟုတ်ပါဘူး.. သူငယ်ချင်းတွေ၊ မောင်နှမတွေ၊ မိသားစုဝင်တွေဟာလည်း တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အားပေးလိုတဲ့ သဘောတွေ၊ လက်ဖ၀ါးတွေဆီကနေတစ်ဆင့် နှလုံးသားထဲကို ခွန်အားတွေ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ စိမ့်ဝင်စီးဆင်းသွားစေဖို့ သဘောတွေနဲ့ လက်ကလေးတွေကို ညင်သာစွာ ကိုင်တွယ်လိုကြတယ် မဟုတ်လား။ ကျွန်မဆိုလည်း သူငယ်ချင်း အချင်းချင်းကို အားပေးလိုတဲ့ အချိန်မှာ လက်လေးတွေကို ဖြစ်ညှစ်ပြီး နင် အားတင်းထားစမ်းပါ ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ လက်ကိုင်လေ့ရှိတယ်။ လက်ကိုင်တာ၊ ပွေ့ဖက်တာတွေဟာ စိတ်ဓါတ်အင်အားကိုလည်း တစ်ကယ်ဖြစ်စေပါတယ်။
ချစ်သူရည်းစားတွေကြားမှာဖြစ်ဖြစ်၊ သူငယ်ချင်းတွေကြားမှာပဲဖြစ်ဖြစ် လက်ကိုင်ခြင်းနည်းလမ်းတွေ များစွာရှိသလို တစ်ခုစီမှလည်း အဓိပ္ပယ်လေးတွေ တစ်မျိူးစီ ရှိတတ်ကြပါသေးတယ်။ တစ်ယောက်လက်ကလေးကို တစ်ယောက် ဘယ်လိုနည်းနဲ့ အကောင်းဆုံး အဓိပ္ပာယ်အရှိဆုံး ကိုင်ကြတယ်ဆိုတာလေးတွေကို ကျွန်မက ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
1. လက်ကလေးကို ငြိမ်သက်စွာကိုင်ကြမယ်။
ဒီနည်းလမ်းလေးကတော့ အရိုးရှင်းဆုံး လက်ကိုင်နည်းလေးပါပဲရှင်။ ကိုယ့်ချစ်သူလေးရဲ့ လက်ကလေးကို ငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ မြဲမြဲလေး ဆုပ်ကိုင်ထားကြတဲ့ ပုံစံလေးပေါ့။ လူတွေကြားထဲ သွားလာကြတဲ့အခါမှာလည်း ဒီလိုလေးလက်ကိုင်ပြီးသွားတာဟာ Formal အကျဆုံးနည်းလေးတစ်နည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွဲ ပူးပူးကပ်ကပ်နဲ့ ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲကို မသိဘူး ဆိုတဲ့ စကားသံမျိုးတွေကလည်း ကင်းဝေးစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလေးကတော့ ရိုးရှင်းပေမယ့် နှလုံးသားချင်း ခိုင်မြဲစွာချိတ်ဆက်ထားကြစေဖို့ အရေးပါတဲ့ ပြင်ကထိတွေ့ ဆက်ဆံခြင်းလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ရှင်။
2. လက်ချောင်းလေးတွေကို ချိတ်ဆက်ယှက်နွယ်ပြီးကိုင်နည်း
တစ်ယောက်လက်ချောင်းလေးတွေကို နောက်တစ်ယောက်နဲ့လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီးကိုင်တဲ့ လက်ကိုင်နည်းလေးပေါ့။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ကို ပိုမိုရင်းနှီးစေတဲ့ အသွင်လေးကိုလည်း ဖော်ဆောင်ပါတယ်။ ချစ်သူနှစ်ဦးတည်း ကြည်ကြည်နူးနူးလျှောက်သွားကြတဲ့ အချိန်မျိုးမှာ ဒီလိုလေး လက်ကိုင်ဖို့အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ရှင်။
3. လက်ချောင်းလေး တစ်ချောင်းတည်းကို ဆုပ်ကိုင်နည်း
ချစ်သူရဲ့ လက်ချောင်းလေးတွေထဲက ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ လက်ချောင်လေး တစ်ချောင်းထဲကိုပဲ မြတ်မြတ်နိုးနိုး ဆုပ်ကိုင်ခြင်းဟာလည်း နှစ်ဦးသားကြားက ချစ်ခြင်းတရားတွေကို ပိုမိုရင်းနှီးစေပါတယ်ရှင်။ များသောအားဖြင့်တော့ လက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းတည်းကို ကိုင်ကြတာ တွေ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနည်းလမ်းလေးကတော့ နည်းနည်းအပျော်သဘောကို ဆောင်ပါတယ်။ ပြောချင်တဲ့ ပွိုင့်က အပျော်တမ်းထားတဲ့ ရည်းစားတွေကို လက်ကိုင်တဲ့အခါ ကိုင်တဲ့နည်းလေးပါတဲ့။
4. လက်ဖ၀ါးလေးတွေကို ဖြစ်ညှစ်ကိုင်ခြင်း
ချစ်သူရဲ့ လက်ကလေးကို ရိုးရိုးတန်းတန်းကိုင်ထားရင်းနဲ့ပဲ လက်ဖ၀ါးလေးတွေကို ဖြစ်ညှစ် ဆုပ်ကိုင်ပေးခြင်းဟာ နှစ်ဦးစလုံးအတွက် စိတ်အပန်းဖြေရာ သဘောကိုလည်း ဖော်ဆောင်ပါတယ်တဲ့။ နှစ်ဦးသားကြားက ကြည်နူးစရာ အချိန်လေးတွေကို တစ်ယောက်လက်ကလေးကို တစ်ယောက်ဖြစ်ညှစ်ဆော့ကစားရင်း ကုန်ဆုံးစေနိုင်ပါတယ်။ အတူတူယှဉ်တွဲထိုင်ကြတဲ့ အခါမျိုးမှာ လက်ကိုင်ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလေး ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
5. လက်နှစ်ဖက်လုံးဖြင့် ခပ်ဖွဖွဆုပ်ကိုင်ခြင်း
တစ်ယောက်လက်ကို နောက်တစ်ယောက်က လက်နှစ်ဖက်လုံးနဲ့ ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ ပုံစံမျိုးလေးပါ။ နှစ်ဦးသား မျက်နှာချင်းဆိုင် ရပ်နေကြတဲ့အခါမျိုးမှာ ပြုလုပ်ဖို့ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းလေးဖြစ်တဲ့အပြင် ကိုယ့်နှလုံးသားထဲက ခွန်းအားတွေ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကို လက်သွေးကြောလေးတွေဆီကနေတစ်ဆင့် နောက်တစ်ယောက်ရဲ့ ရင်ထဲကို စီးဆင်းစေပြီး ရင်းနှီးမှုလည်း ပိုစေပါတယ်တဲ့ရှင်။ ချစ်သူကပေးတဲ့ လုံခြုံမှု၊ မြတ်နိုးမှုတွေကိုလည်း အသေအချာ ရရှိခံစားစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
6. လက်ဖ၀ါးလေးတွေကို ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်ခြင်း
ဒါလေးကလည်း ရင်းနှီးနွေးထွေးမှု ပိုရရှိစေပြီး မရိုးမရွလေး ဖြစ်စေပါတယ်တဲ့ (ဘာလဲတော့ မသိဘူး)။ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေ သတိမထားမိစေပဲ ချစ်သူရဲ့လက်ဖ၀ါးလေးတွေကို ပွတ်သပ်ကျီစယ်နိုင်ပါတယ်။ လက်ချောင်းလေးတွေကို အသုံးပြုပြီး သူ့ရဲ့ လက်ဖ၀ါလေးကို up and down ပွတ်သပ်ပေးခြင်းဟာလည်း အရမ်းကို romantic ဖြစ်စေပါတယ်တဲ့ရှင်။
7. လက်ကလေးကို နမ်းရှုပ်ပြီးကိုင်ခြင်း
ချစ်သူနှစ်ဦးတည်း ရှိနေကြတဲ့အချိန်မှာ လက်ကိုင်ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းလေး ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်သူက ကိုယ့်လက်ကလေးကို နမ်းမယ့်အခိုက်မှာ ကိုယ့်လက်ကလေးတွေက သန့်ရှင်းလှပနေရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့ရှင်။
8. လက်ညှိုးနဲ့ လက်မညှပ်ပြီးလက်ကိုင်ခြင်း
ဒီနည်းလမ်းလေးက နည်းလမ်းကောင်းလေးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ချစ်သူကို အလေးအနက် မထားရာရောက်ပါတယ်။ နှစ်ဦးကြားက ဆက်ဆံရေးဟာ တင်းမာ မနေဘူးဆိုရင်တော့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ၊ ပျော်စရာတစ်မျိုးဖြစ်မှာ မှန်ပေမယ့် အခြေအနေမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့ ဒီနည်းလေးကို လုံးဝကို မသုံးသင့်ပါဘူးရှင်။
9. နွေးထွေးစွာ လက်ကိုင်ခြင်း
ဆိုပါတော့ အပြင်မှာရာသီဥတု သိပ်အေးနေတယ်။ လက်ဖျားလေးတွေ အေးစက်နေတယ်။ ချစ်သူနဲ့လည်း အတူရှိနေတယ်။ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ တစ်ယောက်လက်ကလေးကို တစ်ယောက်ကိုင်ပြီး နွေးထွေးစေခြင်းဟာ ဘာနဲ့မှမတူတဲ့ မေတ္တာဓါတ်ကို လွှမ်းခြုံခံစားရစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
10. သင်္ကေတများဖြင့် လက်ကိုင်ခြင်း
သမားရိုးကျ မဟုတ်တဲ့ လက်ကိုင်နည်းလေး ဖြစ်ပေမယ့် ဒီနည်းလေးကို အရမ်းကျွမ်းတဲ့ သူမျိုးအတွက်ကတော့ တစ်ကယ့်ကို ပျော်စရာကောင်းတဲ့ နည်းလေးဖြစ်မှာပါ။ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် မြတ်မြတ်နိုးနိုးချစ်ပါတယ် ဆိုတာလေးကို လက်ကိုင်ပြီး သင်္ကေတလေးတွေနဲ့ ဖော်ဆောင်တဲ့ သဘောမျိုးလေးပါ။ ကိုယ့်ရင်ထဲက ခံစားချက်တွေကို လက်သင်္ကေတလေးတွေနဲ့ ပြောပြတာပေါ့ရှင်။ ဓါတ်ပုံအရိုက်ခံတဲ့အခါ ကျွန်မတို့လုပ်နေကျ လက်နှစ်ချောင်းထောင်တာမျိုးလေးတွေနဲ့ သဏ္ဍာန်တူပါတယ်။ လက်နှစ်ချောင်းထောင်ရင် “peace” လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပြီး လက်မ၊ လက်ညှိုးနဲ့ လက်သန်း သုံးချောင်းထောင်ရင်တော့ ” I love you” ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပယ်ကို အားလုံးက ပေါက်ကြတယ်လေ။ အခုနည်းလေးကလည်း အဲလိုပါပဲ။ ချစ်သူက ကိုယ့်လက်ကလေးကို သုံးခါတိတိဖြစ်ညှစ်တယ်ဆိုရင် ဒါဟာ ” I love you” လို့ အဓိပ္ပယ်ရပြီး ကိုယ်ကလည်း သူ့လက်ကလေးကို လေးခါတိတိပြန်လည် ဖြစ်ညှစ်ရင် ” I love you too” လို့ အဓိပ္ပာယ် ရပါတယ်တဲ့ရှင်။
Filed under မှတ်သားစရာ နည်းယူစရာ and tagged love, sex |	18 Comments
Good Tips for Everything!
Posted on February 23, 2009 by cuttiepinkgold
ကျွန်မတို့တွေ လူမှုဘ၀မှာ ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့ဆိုရင် ငွေကြေးတောင့်တင်းဖို့အပြင် ကျန်မားရေးကောင်းဖို့၊ ရုပ်ရည်ရူပကာ လှပဖို့၊ လူမှု့ဆက်ဆံရေး ချောမွေ့ အဆင်ပြေစေဖို့ စတာတွေကလည်း မလွဲမသွေ လိုအပ်ပါတယ်ရှင်။ တစ်နေ့က ကျွန်မရဲ့ Mail Box ထဲကို ရောက်လာတဲ့ Forward Mail တစ်စောင်ထဲက အကြောင်းအရာတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်တာနဲ့ ဒီမှာပြန်လည် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ အရေးကြီးတဲ့ အချက် 40 တိတိကို ရေးသားဖော်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
ကျန်းမာရေး ကောင်းဖို့အတွက် ဆိုရင်
2. မနက်စာကို ဘုရင်လိုစား၊ နေ့လည်စာကိုတော့ မင်းသားလေးလိုစား၊ ညစာကိုတော့ သူတောင်းစားလို စားပါတဲ့။ (အားလုံး နားလည်ကြမှာပါနော်)
3. သစ်ပင်ပေါ်က ရတဲ့ ဟင်းသီး ဟင်းရွက်တွေကို များများစားပေးပါ၊
4. ဘ၀မှာ3E နဲ့ ရှင်သန် နေထိုင်ပါ — Energy, Enthusiasm နဲ့ Empathy တို့ဖြစ်ပါတယ်။
5. တရားထိုင်ခြင်း၊ ယောဂ ကျင့်ခြင်း၊ ဘုရားရှိခိုးခြင်း တို့ကိုလည်း ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
6. ကစား ခုန်စားလည်း များများ ပြုလုပ်ပေးဖို့ လိုအပ်တယ်။
7. သင် 2008 ခုနှစ်မှာ ဖတ်ခဲ့တဲ့ စာအုပ်အရေအတွက်ထက် ဒီနှစ်မှာ များများပိုဖတ်ပါ။
8. တစ်ရက်မှာ 10 မိနစ်လောက် ဆိတ်ဆိတ်နေကြည့်ဖို့ကိုလည်း ကြိုးစားကြည့်သင့်တယ်။
9. တစ်ရက်မှာ7နာရီလောက်တော့ အနည်းဆုံး အိပ်သင့်ပါတယ်။ (ကျွန်မဆို 10 နာရီလောက် အိပ်တာ)
10. တစ်ရက်မှာ 10 မိနစ်ကနေ နာရီဝက်လောက်ထိ လမ်းလျှောက်သင့်ပါတယ်။ လမ်းလျှောက်နေစဉ်မှာလည်း မျက်နှာလေးကို ခပ်ပြုံးပြုံးလေး နေပေးရမယ်နော။ (အရူးလို့တော့ မထင်လောက်ပါဘူးနော်..: P)
11. ကိုယ့်ဘ၀ကို သူများတွေနဲ့ မယှဉ်ပါနဲ့။ သူတို့ ဘာလမ်းကြောင်းကို လျှောက်လမ်းနေတယ်ဆိုတာ သင် မသိနိုင်ဘူးလေ။
12. ကိုယ်မထိမ်းချုပ်နိုင်တဲ့ အရာတွေပေါ်မှာ မကောင်းမြင်စိတ်တွေ မထားပါနဲ့။ အဲ့ဒါတွေကြောင့်လည်း စိတ်ဆင်းရဲ မနေပါနဲ့။ လက်ရှိ ကိုယ့်မှာရှိနေတာလေးကို တန်ဘိုးထားပြီး ဒါတွေကိုပဲ ပိုကောင်းအောင် လုပ်လိုက်ပါ။
13. အလုပ်တွေကိုလည်း အလွန် အကျွံ မလုပ်ပါနဲ့.. Limit တစ်ခုထိပဲ လုပ်တာ ကောင်းပါတယ်။
14. ကိုယ့်ကိုကိုယ် သိပ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီး မခိုင်းစေပါနဲ့။ ဘယ်သူမှလဲ ဒါမျိုးမလုပ်ပါဘူး။ သက်တောင့် သက်သာလေးသာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။
15. ကိုယ့်ရဲ့ တန်ဘိုးရှိတဲ့ စွမ်းအင်တွေကို အတင်းပြောခြင်းဖြင့် မကုန်ဆုံးပါစေနဲ့။
16. အိပ်နေစဉ်မှာထက် နိုးနေချိန်တွေမှာ အိပ်မက် ပိုမက်ပါ။
17. မနာလို ၀န်တိုဖြစ်နေတာဟာ အချိန်ဖြုန်ခြင်း တစ်မျိုးပါပဲ။ သင့်မှာ ရှိသင့်ရှိထိုက်တာတွေ အားလုံးရှိနေပါတယ်။
18. အတိတ်က ပြသနာတွေကို မေ့လိုက်ပါ့တော့။ ကိုယ့်ရဲ့ လက်တွဲဖော်၊ ကြင်ဖော်တွေမှာ အတိတ်က အရိပ်ဟောင်းတွေ ရှိနေရင်လည်း ပြန်မဖော်ပါနဲ့တော့။ ဒါတွေက လက်ရှိဘ၀ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေကို ဖျက်ဆီးလိမ့်မယ်။
19. ဘ၀ဟာ သိပ်တိုတောင်းပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ကို မုန်းဖို့ ဆိုတဲ့ အချိန်တောင် ရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် တစ်ခြားလူတွေကို မမုန်းပါနဲ့။
20. ပစ္စုပ္ပန်မှာ ပျော်ရွှင်ဖို့အတွက် အတိတ်တွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ရယူလိုက်ပါ။
21. ကိုယ့်ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေရဲ့ သခင်ဟာ ကိုယ်မှလွဲလို့ နောက်တစ်ယောက် မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
22. ဘ၀ဆိုတာ ကျောင်းတော်ကြီး တစ်ခုဖြစ်တယ်။ သင်က အဲ့ဒီကျောင်းတော်ကြီးမှာ ပညာသင်ရမယ့် ကျောင်းသားလေးပေါ့။ ပြသနာဆိုတာက သင်ရိုးညွှန်းတမ်း တစ်ခုရဲ့ အစိတ်အပိုင်းမျှသာ ဖြစ်တယ်။ အက္ခရာ သင်္ချာတွေကို တွက်ချက်သလို ဖြေရှင်းနိုင်သွားမှာပါ။ အဲ့ဒါတွေရဲ့ သင်ခန်းစာကတော့ သင့်ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးအတွက် အရေးပါနေမှာပေါ့။
23. များများပြုံးပါ၊ များများရီပါ။
24. အငြင်းအခုံတွေတိုင်းမှာ သင်ချည်းပဲ အနိုင်ရနေမှာ မဟုတ်ဘူး။ သင် သဘောမတူတာတွေကို သဘောတူအောင် ကြိုးစားကြည့်လိုက်ပါလား။
25. သင့်မိသားစုနဲ့ မကြာခဏ ဖုန်းပြောပါ။ အဝေးရောက်နေတယ်ဆိုရင်ပေါ့။ တူတူနေတယ်ဆိုရင်တော့ နွေးထွေးတဲ့ ဆက်ဆံရေးလေးဖြစ်အောင် တည်ဆောက်ပါ။
26. အများသူငှာအတွက် ကောင်းမှုတစ်ခု နေ့စဉ်ပြုကြည့်ပါ။
27. လူတိုင်းကို အရာအားလုံးအတွက် ခွင့်လွတ်တတ်ဖို့ ကြိုးစားကြည့်ပါ။ (သိပ်စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတယ် ကိုယ်တွေ့ပါပဲ)
28. အသက် 70 ကျော် ဘိုးဘိုး ဘွားဘွားတွေ၊ အသက်6နှစ်အောက် ကလေးတွေနဲ့ အချိန်များများ ပိုဖြုန်းပါ။
29. တစ်နေ့မှာ လူသုံးယောက်လောက်ကို ကိုယ့်ကြောင့် ပြုံး ရီ သွားအောင် ကြိုးစားကြည့်ပါလား။
30. တစ်ခြား သူတွေ သင့်ကို ဘာပဲ ထင်ထင်။ ဒါသင့်အလုပ် မဟုတ်ဘူး။
31. သင့်ရဲ့ အလုပ်က သင်နေမကောင်းဖြစ်နေချိန်မှာ သင့်ကို လာပြုစုမှာ မဟုတ်ဘူး။ သင့်ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ၊ မိသားစုဝင်တွေကသာ သင့်အနားမှာ ရှိနေကြလိမ့်မယ်။ သူတို့တွေနဲ့ များများ ထိတွေ့နေဖို့ လိုအပ်တယ်။
32. မှန်ကန်တဲ့ အရာကိုသာ လုပ်ပါ။
33. အသုံးမ၀င်တဲ့၊ နှစ်လိုဖွယ်မရှိတဲ့၊ ကြည်နူးဖွယ် မကောင်းတဲ့ အရာမှန်သမျှကို သင့်စိတ်ထဲက ထုတ်ပစ်လိုက်ပါ။
34. ဘုရား သခင်က အရာအားလုံးကို စောင့်ရှောက်လိမ့်မယ်။
35. ကောင်းတာပဲ ဖြစ်နေဖြစ်နေ၊ ဆိုးတာပဲ ဖြစ်နေ ဖြစ်နေ မမြဲပါဘူး။ အမြဲ ပြောင်းလဲနေမှာ ပါပဲ။
36. ကိုယ်ဘာတွေပဲ ခံစားနေရ နေရ၊ ကိစ္စ မရှိပါဘူး။ ကဲ… လာ သွားစို့.. အလှပြင်လိုက်၊ ရှိုးထုတ်လိုက်။ ပျော်ပျော်နေရမှာပေါ့။
37. အကောင်းဆုံးတွေဆိုတာ ဖြစ်လာအုံးမှာပါ။
38. နံနက်တိုင်းမှာ အသက်ရှင် အန္တရာယ် ကင်းပြီး နိုးထလာတာတိုင်းအတွက် ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါ။
39. ကိုယ့်ရဲ့ အတွင်း စိတ်သန္တန်ဟာ အမြဲပျော်ရွှင်နေရမယ်။ ဒါကြောင့် ပျော်ပျော်သာနေပါ။
နောက်ဆုံး အချက် 40 မြောက်လာပါပြီ။ နောက်ဆုံးမှထားလို့ အရေးမကြီးတာ မဟုတ်ဘူးနော်။ ဘာတဲ့လဲ
40. ဒီအီးမေလ်းကို သင် ဂရုတစ်စိုက်ရှိတဲ့ လူ အယောက် 40 ဆီကို Forward လုပ်လိုက်ပါတဲ့။ ကျွန်မကတော့ တစ်ရက်ကို လူ ၁၀၀ ကျော်လောက် လာဖတ်နေကြတဲ့ ကျွန်မရဲ့ ဘလောဂ့်မှာ ပြန်လည် ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။ အားလုံးကို ကျွန်မက ချစ်တာကိုးရှင့်။
Filed under မှတ်သားစရာ နည်းယူစရာ and tagged Health, life, personality |	15 Comments
Good Tips for Life!
Posted on September 18, 2008 by cuttiepinkgold
ဒီလောကမှာရှိတဲ့ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်နဲ့မှ သင့်ကိုယ်သင် ယှဉ်မကြည့်လိုက်ပါနဲ့.. ယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒါဟာ ကိုယ့်ဟာကိုယ် စော်ကားတဲ့ သဘောပါပဲ။
သော့မရှိပဲ ဖွင့်လို့ရတဲ့ lock ကို ဘယ်သူကမှ မတီထွင်ခဲ့ပါဘူး။ ထိုနည်းတူပါပဲ.. ဘုရားသခင်ကလည်း အဖြေမရှတဲ့ ပြသနာတွေကို ဖန်ဆင်းပေးနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။
သင်စိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့အခါ လောကကြီးက သင့်ကိုလှောင်ပြောင်လိမ့်မယ်၊ သင်စိတ်ပျော်ရွှင်နေချိန်မှာတော့ သင့်ကိုပြုံးပြနေလိမ့်မယ်။ သင်ကတစ်ခြားသူတွေကို ပျော်ရွှင်စေချိန်မှာတော့ သင့်ကို လောကကြီးက အလေးပြုနေမှာပေါ့။
အောင်မြင်တဲ့ လူသားတိုင်းမှာ နာကြည်းစရာကောင်းတဲ့ ဇတ်လမ်းလေးတွေ ရှိနေတတ်ကြတယ်။ ၀မ်းနည်းစရာ၊ နာကြည်းစရာ ပုံပြင်တွေ၊ ဇတ်လမ်းတွေဟာလည်း ပျော်ရွှင်စရာ နိဂုံးတွေ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ ဒီတော့.. နာကျင်စရာတွေကို လက်ခံပြီး အောင်မြင်မှုအတွက် အသင့်ဖြစ်နေပါစေ။
တစ်ပါးသူတွေရဲ့အမှားကို ထောက်ပြဖို့ သိပ်ကိုလွယ်ကူတယ်၊ ကိုယ့်အမှားကို ကိုယ် သဘောပေါက်လက်ခံဖို့ ကျတော့ ခက်ခဲတတ်ကြတယ်။ ကိုယ့်ခြေထောက်ကိုယ် ဖိနပ်နဲ့ လုံခြုံအောင် ကာကွယ်ထားနိုင်ပေမယ့် ကမ္ဘာကြီးကိုကျတော့ ကော်ဇောတစ်ချပ်နဲ့ ဘယ်လိုမှ လုံအောင်ဖုံးနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။
ဆိုးဝါးတဲ့ အတိတ်ကို ဘယ်သူကမှ ပြန်ပြီးပြောင်းလဲလို့ မရနိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် လူတိုင်းဟာ အနာဂတ်မှာ အောင်မြင်နိုင်ဖို့ ခုကတည်းက စတင်နိုင်တယ်။
ပြသနာတစ်ခုကို ဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုရင် ဘာမှတွေးပူနေစရာ မလိုဘူး။ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းတွေကြောင့်သာ ပြသနာတွေကို ဖြေရှင်းလို့မရ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။
အခွင့်အရေးကို လက်လွတ်လိုက်ရရင်လည်း ငိုကြွေးမနေပါနဲ့၊ သင့်ရှေ့မှာ ပိုကောင်းတဲ့ အခွင့်အလမ်းတစ်ခု ရှိနေပါသေးတယ်။
ရင်ဆိုင်ရမှာတွေကို ပြောင်းလဲလိုက်ခြင်းက ဘာကိုမှ ဖြစ်မလာစေဘူး။ အပြောင်းအလဲတွေကို ရင်ဆိုင်လိုက်မှသာ အရာရာကို ပြောင်းလဲသွားစေမှာပါ။
တစ်ခြားလူတွေကို နားပူနားဆာ လုပ်မနေပါနဲ့၊ ငြိမ်းချမ်းမှုကို လိုချင်ရင် သင့်ကိုယ်သင် ပြောင်းလဲပစ်လိုက်ပါ။
အမှားဆိုတာ ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ နာကျင်စရာတွေပါ။ ဒါပေမယ့် နှစ်တွေကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ အမှားတွေစုဝေးပြီး အတွေ့အကြုံဆိုတာ ဖြစ်လာတယ်။ အဲဒီ အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပဲ အောင်မြင်မှုကို ရရှိစေတယ်။
သင်ရှုံးနိမ့်တဲ့အခါ ရဲရင့်ပါ.. အောင်မြင်တဲ့အခါကျတော့ တည်ငြိမ်တတ်ပါစေ။
Filed under မှတ်သားစရာ နည်းယူစရာ |	2 Comments
The4wives of our lives
Posted on September 16, 2008 by cuttiepinkgold
ကျွန်မ ဘလောဂ့်စရေးတုန်းက ဒီပုံပြင်လေးကို အင်္ဂလိပ်လို တင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ မေလ်းထဲကို ရောက်လာတဲ့ ပုံပြင်လေးတစ်ခုကို ယူတင်ခဲ့တာလို့ပဲ ထင်တယ်ရှင့်။ သေချာတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး။ အဲဒီအဟောင်းလေးကိုပဲ ဘာသာပြန်ပြီး ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါမယ်နော်။ စိတ်ညစ်နေတုန်းလေး အပျင်းပြေပေါ့..
ဟိုးရှေးရှေးတုန်းကပေါ့ မိဘုရားလေးယောက် ရှိပြီး သိပ်ကို ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ ဘုရင်ကြီးတစ်ပါး ရှိသတဲ့။ ဘုရင်ကြီးဟာ သူ့ရဲ့ စတုတ္ထမြောက် မိဘုရားကိုတော့ အချစ်ဆုံးဖြစ်ပြီး အကောင်းဆုံး၊ အနုညံ့ဆုံး၊ အချိုမိန်ဆုံး ဆက်ဆံပါသတဲ့။ တတိယမြောက် မိဘုရားကိုလည်း ချစ်တာပါပဲ။ အိမ်နီးချင်း တိုင်းပြည်တွေကိုလည်း တတိယမြောက် မိဘုရားကို ကြွားလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီမိဘုရားဟာ သူ့ကို တစ်နေ့နေ့ တစ်ချိန်ချိန်မှာ ထားသွားခဲ့မှာကိုတော့ သူစိုးရိမ်နေတတ်ပါတယ်။
ဒုတိယမြောက် မိဘုရားကို ချစ်တာကျတော့ တစ်မျိုး.. အဲဒီမိဘုရားကို သူ့ရဲ့တိုင်ပင်ဖော်၊ တိုင်ပင်ဖက်၊ ယုံကြည်အားကိုရာအဖြစ် ဘုရင်ကြီးက မှတ်ယူတယ်။ ပြသနာတွေ ဖြစ်လာတိုင်းမှာ ဒုတိယမြောက် မိဘုရားနဲ့ တိုင်ပင်လေ့ရှိပြီး မိဘုရားကလည်း အမြဲကူညီဖြေရှင်းပေးပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး မိဘုရားကတော့ ဘုရင်ကြီးအပေါ်မှာ တော်တော်သစ္စာရှပါတယ်။ ဘုရင်ကြီးရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး ပိုင်းတွေမှာ ပါဝင်ကိုင်တွယ်ပေးပြီး ဘုရင်ကြီးကိုလည်း နှစ်နှစ်ကာကာကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘုရင်ကြီးကတော့ သူ့ကို တစ်ခြား မိဘုရားတွေလောက် မချစ်ပါဘူး။
တစ်ရက်မှာတော့ ဘုရင်ကြီးစာ အသဲအသန်ကို နာမကျန်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ဘ၀သက်တမ်း ကုန်ဆုံးတော့မှာကို သိနေတဲ့ ဘုရင်ကြီးဟာ သူ့ရဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေ၊ ဇိမ်ရှိရှိ နေခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းကို ပြန်လည်စဉ်းစားမိပြီး “ငါ့မှာ မိဘုရား လေးယောက်ရှိတယ်.. ဒါပေမယ့် ငါသေရတော့ တစ်ယောက်ထဲပါလား” လို့ တွေးတော့မိတယ်။ နောက်တော့ သူက သူ့ရဲ့ စတုတ္ထမြောက် မိဘုရားကို ခေါ်ပြီး မေးလိုက်တယ်..
“အချစ်ရေ.. ကိုယ်မင်းကို အချစ်ဆုံးပဲ ဆိုတာ မင်းသိတယ်နော်.. မင်းကို ကောင်းပေ့၊ လှပေ့ဆိုတဲ့ အ၀တ်အစားတွေ၊ အသုံးအဆောင်တွေကို ချီးမြှင့်ခဲ့တယ်၊ မင်းကိုလည်း ငါ အရမ်းဂရုစိုက်ခဲ့တယ်.. မင်း ငါနဲ့ အတူတူလိုက်သေနိုင်မလား” ။ “လုံးဝပဲ” လို့ မိဘုရားက ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ နောက်ထပ် စကားတစ်လုံး တစ်ပါတမှ မပြောပဲ လှည့်ထွက်သွားခဲ့တယ်။ သူ့ရဲ့အဖြေစကားဟာ ဘုရင်ကြီးရဲ့ နှလုံးသားကို ဓါးနဲ့မွှန်းသလိုပဲ ခံစားရစေပါတယ်။
၀မ်းနည်းသွားတဲ့ ဘုရင်ကြီးဟာ ဒုတိယမြောက် မိဘုရားကို ခေါ်ပြန်တယ်။ “ငါဟာ မင်းကို ငါ့ဘ၀နဲ့ ချီပြီးချစ်ခဲ့တယ်။ ခုတော့ ငါသေရတော့မယ်.. မင်း ငါနဲ့တူတူ လိုက်သေနိုင်မလား”။ “မသေနိုင်ပါဘူးရှင်… ဘ၀ဆိုတာ ကောင်းတာတွေကို ခံစားဖို့ ဖြစ်လာတာ..ရှင်သေရင် ကျွန်မ နောက်တစ်ယောက်နဲ့ လက်ထပ်မှာပေါ့” လို့ဖြေလိုက်တယ်။ ဘုရင်ကြီးရဲ့ နှလုံးသားဟာ အေးစက်တောင့်တင်းသွားလေရဲ့။
နောက်တော့ တတိယမြောက် မိဘုရားကိုလည်း ခေါ်လိုက်တယ်။ “ငါဟာ အမြဲတမ်းပဲ မင်းရဲ့ အကူအညီတွေကို ယူခဲ့တယ်.. မင်းကလည်း ပြသနာတွေကို ငါနဲ့အတူတူရင်ဆိုင်ခဲ့တယ်။ ငါနဲ့ တူတူလိုက်သေနိုင်မလား အချစ်ရယ်”။ “၀မ်းနည်းပါတယ်ရှင်.. ဒီတစ်ခါတော့ ကျွန်မ ရှင့်ကို မကူညီနိုင်တော့ပါဘူး.. အဲ ဒါပေမယ့် ရှင့်ရဲ့ အသုဘကိုတော့ ကျွန်မ လိုက်ပို့ပေးပါ့မယ်.. ရှင့်ရဲ့ အုတ်ဂူဆီသို့လည်း ကျွန်မ လာပါ့မယ်” လို့ ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ ဘုရင်ကြီးဟာ အတော်လေးကို စိတ်ဆင်းရဲသွားတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာပဲ “ကျွန်မ ရှင်နဲ့ အတူတူလိုက်သေမယ်.. ရှင်ဘယ်သွားသွား ရှင့်နောက်က ကျွန်မလိုက်ဖို့ အသင့်ပါပဲ” ဆိုတဲ့ အသံကို ကြားလိုက်ရတယ်။ ဘုရင်ကြီးဟာ ချက်ချင်းပဲ ခေါင်းထောင်ကြည့်လိုက်တယ်။ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံး မိဘုရားကို သူတွေ့လိုက်ရတယ်။ သူမဟာ အတော်လေးကို ပိန်လှီးနေပြီး ဝေဒနာ ခံစားနေရပုံ ပေါက်နေတယ်။ ဘုရင်ကြီးဟာ နောက်ဆုံး အနေနဲ့ သူမကို ပြောလိုက်တယ် “ငါ မင်းကို ပိုဂရုစိုက်ခဲ့သင့်တာ.. နောက် ဘ၀မှာ အခွင့်အရေး ရှိမယ်ဆိုရင် ငါပြန်လည်ပေးဆပ်ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်” လို့ပြောလိုက်တယ်။
ပုံပြင်လေးကတော့ ဒါပါပဲရှင်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့တွေရဲ့ ဘ၀မှာ ဇနီးလေးယောက်ရှိပါတယ်…
စတုတ္ထမြောက် ဇနီးကတော့ ကျွန်မတို့ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာပါပဲ.. သူ့ကို ဘယ်လောက်ပဲ ကောင်းကောင်း ကျွေးမွေး ပြုစုခဲ့ပါစေ.. သေသွားတဲ့ တစ်နေ့မှာတော့ ထားခဲ့ရတာပါပဲ။
တတိယမြောက် ဇနီးကတော့ ကျွန်မတို့ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပါ။ ကိုယ်သေသွားတဲ့ အချိန်မှာ တစ်ပါးသူ လက်ထဲရောက်သွားတာပဲလေ။
ဒုတိယမြောက် ဇနီးကတော့ ကျွန်မတို့ရဲ့ မိသားစုနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေပေါ့။ အသက်ရှင်နေစဉ်မှာ အနားမှာရှိပြီး ဘယ်လောက်ပဲ ကောင်းခဲ့ ကောင်းခဲ့၊ သူတို့တွေ ကိုယ့်အတွက် အများဆုံး လုပ်ပေးနိုင်တာကတော့ ကိုယ်သေသွားတဲ့အချိန်မှာ အသုဘ လိုက်ပို့မယ်.. နောက်တော့ အုတ်ဂူလေးဆီလာကြမယ်.. ဆုတောင်းပေးကြမယ်။
အဲ. ပထမဆုံး ဇနီးကတော့ ကျွန်မတို့တွေရဲ့ ၀ိညာဉ်.. စိတ်ပဲပေါ့ရှင်။ သူ တစ်ခုတည်းကသာ သေသွားတဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ်သွားရာနောက်ကို လိုက်နိုင်တဲ့ သူတွေပေါ့။
အဲဒီတော့ ကျွန်မတို့တွေ လုပ်သင့်တာက ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ဓါတ်၊ စိတ်အင်အားကို ခုကတည်းက တောင့်တင်းခိုင်မာအောင် လုပ်ကြဖို့ပါပဲ။ ပြောရမယ်ဆိုရင် ကိုယ်သေချိန်မှာ ဘ၀ကူးကောင်းအောင် ခုကတည်းက ပြင်ဆင်ထားသင့်တာပေါ့။ ကျွန်တို့ ကျင်လည်ရာ သံသရာမှာ သူကသာ အဓိက ဖြစ်ပါတယ်။ ခရစ်ယန်တွေရဲ့ အလိုတော်အရ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ဘုရားသခင်က ပြန်လည်ရှင်သန်ထမြောက်ဖို့ရာ အခွင့်အရေးပေးတဲ့ တစ်နေ့မှာ ကိုယ်ဟာ ဒီအတွက် အဆင်သင့်နဲ့ အကောင်းဆုံးဖြစ်နေမှာပဲပေ့ါ။
Filed under မှတ်သားစရာ နည်းယူစရာ |	5 Comments